मण्डलामा तीन कचहरी नाटक 'हाम्रो नेपालमा' मञ्चन हुँदै :: Setopati
मण्डला नाटकघरको चार दिने नाटक प्रस्तुति कार्यक्रम हिजो आइतबार सुरू भएको छ। यी चार दिनमा तीन कचहरी नाटकको श्रृङ्खला ‘हाम्रो नेपालमा’ प्रस्तुत हुँदैछ। मण्डला नाटक स्कुलको पहिलो ब्याचका प्रशिक्षार्थीहरूले अनामनगरस्थित मण्डला घरमा नाटक प्रस्तुत गर्नेछन्।
विद्यार्थीहरूले आफ्नै घर परिवार र समाजमा देखेका मुद्दालाई लिएर तीनवटा कचहरी नाटकहरूको शृंखला तयार पारेको हो। नाटकमा देखाइएको विषयमा दर्शकहरूमाझ छलफल हुनेछ।
फागुन ९ गतेबाट सुरू भएको प्रस्तुतिमा पहिलो दिन तीनवटै नाटक- ‘रूम नम्बर १३’, ‘निसासिएको आवाज’ र ‘अन्तर’ देखाइएको थियो। फागुन १० गते ‘रूम नम्बर १३’ पुनः मञ्चन हुँदैछ। फागुन ११ गते नाटक ‘निसासिएको आवाज’ र ‘अन्तर’ मञ्चन हुँदैछ। फागुन १२ गते भने तीनवटै नाटक भर्चुअल देखाइनेछ।
नाटक ‘रूम नम्बर १३’ मा १९ वर्षीया जूनुमायाको कथा देखाएको छ। उनलाई गाउँमा घाँसदाउरा र चुलाचौकामा जीवन काट्न बाध्य पारिएको छ। तर जूनुमाया आफ्नो समाज बदल्न चाहन्छिन्। दृढ अठोट लिएर महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी तालिम लिन हिडेकी जूनुमायासामु आइपर्ने अनेक संघर्ष र चुनौतीको कथा नाटकमा प्रस्तुत हुनेछ।
त्यस्तै, नाटक ‘निसासिएको आवाज’मा एकल महिला राममायाको कथा देखाइएको छ। उनको छोराको ‘असामान्य’ इच्छालाई लिएर गाउँलेहरू कुरा काट्छन्। गाउँलेका कारण राममायाले पनि आफ्नो छोराले देखेको सपना र इच्छा पुर्याइदिन सक्दिनन्। यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो इच्छा पूरा गर्न राममायाका छोराले के गर्न सक्लान्? उनलाई अरू कसले सघाउँला भन्नेबारे रंगकर्मी र दर्शकहरूबीच छलफल हुने जनाइएको छ।
नाटक ‘अन्तर’मा जातीय विवेदको कथा समेटिएको छ। राजनीतिक माहोलसँग समाजिक यथार्थ देखाउन खोजिएको यो नाटकमा दलित समुदायलाई उपल्लो भनाउदाले दबाउन खोजेको कथा देखाउन खोजेको छ।
ती षडयन्त्र चिर्न पात्रले के-कस्तो काम गर्छिन् र उनलाई कसले सघाउँलान् त? यो प्रश्नबारे रंगकर्मी र दर्शकहरूमाझ छलफल हुनेछ। यी तीन नाटक प्रस्तुतिमा सुस्मिता गुरागाइँ, दिक्षा चौधरी, सुमित्रा पेहिम, प्रदीप ढुंगाना, अनिल कुर्मी, विष्णुमाया परियारलगायत रंगकर्मी छन्।
जम्मा ५० जनाको कोटा छुट्याइएको नाटक हेर्न कुनै टिकट अथवा शुल्क पर्दैन। तर प्री-रेजिष्टर गरेर मात्र सहभागीता जनाउन सकिन्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १०, २०७७, ०२:३४:००